Orinasa sy mpanamboatra aluminium aluminium | firaka
Raha manana milina aluminium ianao dia mila milina, iray amin'ireo loharanom-pahalalana mahomby indrindra izahay ary afaka mamita tsara ny asa.
Inona avy ireo tombony azo amin'ny aliminioma, ary alika firy firy no malaza?
Satria ny Aluminium dia manana fananana tena tsara, noho izany dia manana fampiasa be dia be izy.
Ny hakitroky 1.Amina dia kely dia kely, 2,7 g / cm ihany, na dia malefaka ihany aza izy io, saingy azo amboarina amin'ny aliminioma isan-karazany, toy ny aluminium mafy, aliminioma mafy, alimo alimo, alimo alim-bary sns. Ireto alika aluminium ireto dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny fiaramanidina, fiara, fiaran-dalamby, fanamboarana sambo ary indostrialy famokarana hafa. Ho fanampin'izany, ny rocket univers, space shuttle, satelita dia mampiasa aliminioma sy aliminioma betsaka koa.
2.Aluminum dia mpamatsy hafanana tsara, ny fitondrany mafana dia manana in-3 lehibe kokoa noho ny vy, azo ampiasaina hanamboarana hafanana isan-karazany, hafanana ary kojakoja fandrahoan-tsakafo.
3.Aluminum dia manana fantsom-pandehanana tsara kokoa, amin'ny 100 ℃ ~ 150 ℃ dia azo amboarina amin'ny alim-by vita amin'ny aliminioma izay mahia kokoa noho ny 0.01mm. Ireo foil vita amin'ny aliminioma ireo dia be mpampiasa amin'ny fonosana sigara, vatomamy, sns., Izy io koa azo vita amin'ny tariby aliminioma, fantsona aliminioma ary karazana vokatra aluminium izay mny.
4.Ny ambonin'ny aluminium dia misy sarimihetsika miaro oksida matevina, izay tsy mora tohina. Matetika izy io dia ampiasaina hanamboarana réacte simika, fitaovana ara-pahasalamana, tobim-pampangatsiahana, zavamaniry manadio solika, fantsom-pitrandrahana solika sy gazy.
Ny sasany amin'ireo firaka aliminioma malaza indrindra dia manaraka:
Fampiharana inona no ampiasaina amin'ny aliminioma?
Ny fitaovana aluminium dia ampiasaina indrindra amin'ny faritra misy fiara, faritra misy fiaramanidina, faritra misy fitaovana fitsaboana, faritra elektronika, kojakoja fanaka ary fampiharana hafa
Teo aloha: Pieram-by Staniless